ऐना हेर्ने बानी | नेपाल इटाली डट कम
ऐना हेर्ने बानी
July 28, 2009 — nepalitaly
विहान उठ्नासाथ मुस्कान दिदैं उभिन्छु म ऐना अगाडी । परिक्षाको जति नै घमासान होस् यो क्रम टुट्दैन मेरो । विश्वको करोडौं जनसंख्या म जसरी
नै उभिन्छ होला उठ्नासाथ । कोही बेडको छेवैमा रहेकोमा उभिएलान् त कोही बाथरुमको । उभिन चाहिँ उभिन्छन् । यो मेरो आँकलन हो । तपाइँ पनि पक्कै अपवाद हुनुहुन्न । घडिको अलार्मले बिउँझाउँदा झर्को लागे पनि ऐनामा हँसिलो मुहार लगाइ हालिन्छ । सायद जीवनमा अभिनय यहीँबाट सुरु हुन्छ ।मानिसले आफ्नो अभिनय देखाउने पहिलो नाट्यमञ्च नै आफ्नै कोठाको ऐना हो । त्यसैले होला अरु सँग बोल्ने मामलामा अभ्यासको ल्याब बताउँछन् अर्ति दिने पाकाहरु । स्कुलको वादविवादको तयारी गर्थें म पहिला पहिला ऐना अगाडी । अहिले राम्रो देखिएको छु छैन त्यसको मापनका लागि प्रयोग हुन थालेको छ । धेरैको सुन्दरता ऐनाबाट सुरु हुन्छ । ऐना नभएको भए शहरका युवतीहरु कस्तो पहिरन र मुहारका साथ सपिङ र डेटिङ निस्कन्थे होलान् ? ऐना नहेरी लगाएको लिपस्टिकले ओठको कहाँ देखी कहाँ सम्मको यात्रा गथ्र्यो होला ? कल्पना गर्नुस् त । ” class=”mceWPmore mceItemNoResize” title=”More…” />
ऐनाको कथा सुनेको थिएँ बुबाको मुखबाट सानोमा । एउटा गाउँको मानिस सहर गएछ त्यहाँ उसले एउटा चम्किलो वस्तु देखेछ अचम्म लागेर किनेर ल्याएछ । त्यो उसको गाउँको पहिलो ऐना थियो । कसैले देखेको थिएन उसको गाउँमा ऐना । उसले चम्किलो ऐना लुकाएर राखेको श्रीमतीले भेउ पाइछन् र हेरिछन् । ‘ओहो बुढाले त शहरबाट आफु जस्तै अर्की श्रीमती पो ल्याएछन् त !’ हत्ते गरिन उनले । घरमा यसबारे छलफल भयो । त्यो चम्किलो चिज क्रमैले घरका सबैले हेरे ।
सबैले आफु जस्तो मानिस देखे ऐनामा । कोलाहल सुरु भयो घरमा । शहर गएको लोग्नेले श्रीमतीदेखि परिवार कै सबै सदस्य नयाँ ल्याएछ । गाउँको मुखिया सम्म पुग्यो कुरा । मुखियाले पनि हेरे, नयाँ मुखिया ऐनामा । यसरी त्यो गाउँ भरका जस जसले हेरे आफै जस्तो अर्को देखे र गाउँभर मै त्यस मानिसको बारेमा हल्ला हुन थाल्यो । उसलाई कारवाही गर्ने भए गाउँलेले । शहरबाट त्यही समयमा राजाका दूत आए कामविशेषले त्यो गाउँमा । उनले त्यो ऐना भएको र जसले हेर्छ उसले आफ्नै अनुहार देख्ने बताएपछि शहरबाट ऐना गाउँ लाने मानिसको ज्यान जोगिए छ । अहिले ऐना नभए भाउँतो पर्छ ।
एउटा मानिसले सामान्यतया जीवनभरमा कुल ७० दिन चाहिँ ऐना अगाडी बिताउँछ रे । यो कुरा सुनेको हो कहाँ चाहिँ भुलें कुनै पत्रिकाले रिफरेन्स नै दिएर लेखेको थियो ।
तपाइँ चाहिँ कत्तिको हेर्नुहुन्छ ऐना ?
(ऐनाबारे तपाइँलाई थाहा भएको कुरा थप्नुहोला, नाम र ठेगाना लेख्नुभएमा झन राम्रो ।)
« हिन्दी मोहले झाको उपराष्ट्रपति पद धरापमा
बैद्यसहित तीन उपाध्यक्ष राख्न माओवादीमा सहमति »